ဘလော့ကာ Junemoe (ဂျွန်မိုး) နှင့် အင်တာဗျူး (http://june-moe.blogspot.com/) ~ အလွမ်း မင်းသားလေး
10:30 နေဇော် လင်း No comments
စာဖတ်သူများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ... ဒီတစ်ခါ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို သုတ ရသ စာပေ တွေအကြောင်း ရေးသားနေတဲ့ ဘလော့ကာ အစ်မ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ junemoe နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။
စာရေးသူ အများစုဟာ သူတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို သူတစ်ပါး သိအောင် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်လေး တွေကို စာသားလေး အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရေးသားကြပါတယ်။ ဘလော့ကာ အစ်မ junemoe ရဲ့အကြောင်း လေးတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိနိုင်ဖို့ ဒီလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ အစ်မ ...
မေး = အစ်မက ဘလော့လေး လုပ်ပြီး စာရေးတယ်ဆိုတော့ အစ်မရဲ့ နာမည်အရင်းနဲ့ ကလောင် နာမည်ကို သိရပါစေ။
နာမည်အရင်းက မနုနုဝင်း၊ ကလောင်နာမည်က Junemoe(ဂျွန်မိုး) ပါ။
မေး = Junemoe(ဂျွန်မိုး) ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ဘယ်လို စိတ်ကူးလေးနဲ့ ပေးဖြစ်သွားတာလဲ ...
ဂျွန်မိုး ဆိုတာကို ပေးဖြစ်တာက အမက ဇွန်လ မှာ မွေးတာပါ။ မေးလ်အကောင့်ဖွင့်တော့ ဘာပေးရမယ်မသိ တော်တော် စဉ်းစားရတယ်။ နောက်ဆုံး မွေးတဲ့လ june နဲ့ မွေးတာကလည်း မိုးတွင်းအစ ဆိုတော့ junemoe လို့ပေးဖြစ်လိုက်တာ။ အဲ့အချိန်တုန်းက ဂျူမုံ ကားလာနေတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် ဂျူမုံ လို့ ပေးလိုက်ပါလားလို့ စကြသေးတယ်။ junemoe ဆိုတာလေး နှစ်သက်မိလို့ စာရေးတော့လည်း ကလောင်ကို ထွေထွေ ထူးထူး မစဉ်းစားတော့ပဲ ရွေးလိုက်တာပါ။
မေး = အစ်မက အခုဆို ဘလော့လေးတစ်ခု တည်ထောင်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင် သုတရသ စာပေတွေကို ရေးသားမျှဝေနေတယ် ဆိုတော့ ဘယ်တုန်းက စာပေတွေအကြောင်း စတင်ရေးသားလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေး စေလိုပါတယ်။
စာပေအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစားရေးဖြစ်တာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၀၁၁ ကမှပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကဗျာလေးတွေ ရေးဖြစ်တယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရေးတာမဟုတ်ပဲ ၀ါသနာပါလို့ ရေးတာမျိုးပေါ့။ အခုတော့ စာပေအနှစ်သာရလေးတွေ ခံစားမိပြီး ရေးလာတာပါ။
မေး = အခု အစ်မရဲ့ ဘလော့လေးကိုရော ဘယ်တုန်းက စတင်ပြုလုပ်ပြီး စာပေတွေကို ရေးဖြစ်လဲ ?
ဘလော့ ကိုတော့ စက်တင်ဘာမှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်း ကတော့ co.cc နဲ့ လုပ်ပြီးရေးနေတာပါ။ ဘလော့တွေ ပြန်ပွင့်တော့ ပြန်လုပ်ပြီး တစိုက် မတ်မတ် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး = အစ်မ ရေးသား မျှဝေနေတဲ့ သုတရသ စာပေတွေအထဲမှာ ဘယ်လို အကြောင်း အရာလေးတွေကို ဦးစားပေး ရေးသားဖြစ်လဲဆိုတာ သိပါရစေ ။
ဦးစားပေး အနေနဲ့တော့ မထားပါဘူး။ ကိုယ်ရေး ချင်တာလေးတွေ ဝေမျှချင်တာလေးတွေကို ရေးပါတယ်။ တကယ်တော့ အမက နည်းပညာပိုင်းတွေဆိုလည်း ဝေမျှချင်ပါတယ်။ အမ ဘလော့မှာ နည်းပညာပိုင်းဝေမျှမှု အားနည်း ပါသေးတယ်။ အများဆုံး ရေးဖြစ်တာကတော့ ရသ စာပေတွေပါ။ အခုနောက်ပိုင်း ကဗျာတွေ ပိုများပါတယ် ငယ်ငယ် ကတည်းက ကဗျာလေးတွေ ရေးလာတော့ ကဗျာရေးရတာကို ပိုနှစ်သက်မိလို့ပါ။
မေး = စာပေတွေအကြောင်း ရေးတဲ့ သူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ခံစားချက် (သို့) အတွေ့အကြုံ လေးတွေကို များသောအားဖြင့် ရေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစ်မရော ဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးနဲ့ ခံစားပြီး ရေးသားဖြစ်လဲ ?
ဟုတ်ပါတယ် ။ စာရေးသူ အများစုဟာ ခံစားရေးကြတာပါ။ ခံစားရေးမှလည်း စာဟာအသက်ဝင်တာပါ။ စာတစ်ပုဒ် အသက်ဝင်ဖို့ဆိုတာ ရေးသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခံစားမှု အတိုင်းအတာပေါ်လည်း မူတည်တယ်လို့ အမ ယူဆပါတယ်။ ခံစားရေးတဲ့နေရာမှာတော့ နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ခံစားချက်အစစ်ကို ခံစားတာနဲ့ သူတစ်ပါးခံစားချက်ကို အငှားဝင် ခံစားရေးတာမျိုးပေါ့။ တခါတလေကျ စိတ်ကူးအတွေးတွေကို ခံစားမှုရောပြီး စာသားအဖြစ် ပုံဖော်တာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
မေး = အစ်မ ရေးသားတဲ့ စာပေ လေးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး စာဖတ်သူ သိသွားတဲ့ ပိုစ့်မျိုးပေါ့ (သို့) နာမည်ရလာတဲ့ ပိုစ့်လေးရှိရင်အမှတ်တရ ပြောပြပေးပါလား ?
ဘလော့မှာတော့ အမစရေးတုန်းက စာဝင်ဖတ်သူ မရှိခဲ့ဘူး ။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖတ်သူဝင်လာတယ်။ စာဖတ်သူ သိသွားတဲ့ ပို့စ်ဆိုပြီးတော့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။ ဂျွန်မိုး ကလောင် နာမည်နဲ့တော့ ဘဝစာအုပ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီမှာထုတ်တဲ့ Youth Magazine မှာ ပါလာပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ အမအတွက် အမှတ်တရနဲ့ ပထမဆုံး မှတ်တိုင်လေးပေါ့နော်။
မေး = အစ်မ ကြိးစားလို့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ စာအုပ်မှာ ပါလာတယ်ဆိုတော့ အစ်မရင်ထဲက တော်တော်လေး ပျော်နေမှာပဲဗျာ။ အစ်မအတွက် စာပေတွေ ထပ်ရေးဖို့ ခွန်အားတွေ ရှိလာတာပေါ့။ အစ်မရဲ့ ပီတီလေးတွေကို စာဖတ်သူများကို မျှဝေပေးပါလား။
ဟုတ်ကဲ့။ အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိပါတယ်။ တကယ်မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ (၃)ပုဒ်ပို့ပြီး ၃ လကြာတဲ့အခါမှာ တစ်ပုဒ်ပါလာတော့ သူငယ်ချင်း ကတောင် ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း ကြိုးစားရေး သွားမှာပါ။ ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ ဘဝကို ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ အပြည့် တည်ဆောက် သွားမှာပါ။
မေး = အခုဆို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘလော့တွေ တော်တော်များများ ရှိလာကြပါတယ်။ ဝါသနာ အမျိုးမျိုးနဲ့ သူတို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ သူတို့ပေါ့ ... ဘလော့တွေ များလာတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အစ်မ အမြင်လေးကို သိပါရစေ။
အရမ်းကောင်းတာ ပေါ့နော်။ ဘလော့ဆိုတာ လည်းဆိုက်တစ်ခုပဲလေ။ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးတွေ တည်ဆောက်ပြီး မျှဝေရေးသားကြတယ်။ ဘလော့ဂါအချင်းချင်း စာတွေလိုက်ဖတ်ရင်း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတွေ လည်းရကြတယ်။ ရင်းနှီးမှုတွေလည်း တိုးပွားကြတယ်။ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် ဘလော့ပေါ်မှာ သိပ်ကို ရင်းနှီးလာကြတယ်။ စာအရေးအသား ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ ဆီကနေလည်း အတုယူလေ့လာလို့ရတယ်။
အခုဆို ဘလော့ကို အမတို့ဆီမှာ ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ဘလော့ရေးချင်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးတွေ လုပ်လာကြတာတွေ့ရတယ်။ အွန်လိုင်းကို အကျိုးရှိရှိ သုံးစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း တွေထဲမှာ ဘလော့ရေးခြင်းလည်းပါတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီ့ထက်လည်း ဘလော့ဂါတွေ တိုးပွားစေချင်ပါတယ်။
မေး = အစ်မရဲ့ ရေးသားတဲ့ သုတရသ စာပေပိုစ်လေးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒါမမဟုတ် အစ်မရဲ့ ဆိုက်လေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမှတ်တရ တစ်ခုခုကို ပြောပြပေးပါဦး ...
အမှတ်တရပြောရမယ်ဆိုရင် စာပေကို တစိုက်မတ်မတ်ရေးချင်လာတာက မိုဘာဆိုက်ထဲ ၀င်ပြီးတော့ စတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ ၀င်ဝင်ချင်းမှာ ရသပြိုင်ပွဲနဲ့တိုးတယ်။ ၀င်ပြိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဆုမှ မရခဲ့ပါဘူး။ တစ်ချို့အပတ်မှာ နှစ်သိမ့်အနေနဲ့ အမှတ်လေးတွေတော့ ရပါတယ်။
အဲဒီကနေ ဘလော့တွေပွင့်တော့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးမှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေတင်မယ် ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ အသစ်လုပ်တာ အဆင်မပြေလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို အကူအညီ တောင်းရပါတယ်။ အစက အမ ဘလော့နာမည်က http://june-moe.blogspot.com/ ပါ။ ပို့စ်တော်တော်များများတင်ပြီးတော့ အမသုံးတဲ့ မေးလ်က စိတ်မချရတာနဲ့ မေးလ်အသစ်နဲ့ အခု ဘလော့အသစ် ထပ်လုပ်ရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို မောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေက အစ်မအတွက် အမှတ်တရ လေးပါပဲ ..
မေး = အစ်မ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်နဲ့ လေးစား အားကျတဲ့ စာရေးဆရာ စာရေးအဆရာမတွေကို ပြောပြပေးပါဦး ...
စာအုပ်ဆိုရင် အမ အစုံဖတ်ပါတယ်။ အစွဲထားပြီး ဖတ်လေ့မရှိပါဘူး။ အရင်ကတော့ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တာ အဖတ် နည်းခဲ့တော့ အခု ကဗျာပိုင်း စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်နေပါတယ်။ လေးစားအားကျတာကတော့ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမ အကုန်လုံးကိုပါပဲ။ တစ်ယောက်ချင်း ဆီကနေ မတူညီတဲ့ အတွေး၊ အမြင်နဲ့ ဗဟုသုတ၊ ရသတွေကို ရရှိတော့ တစ်မျိုးဆီ နှစ်သက် မိပါတယ်။
မေး = အစ်မရဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်လေး တွေကရော စာရေး ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်လို့ ရည်မှန်း ထားပါသလား ?
အမကတော့ စာရေးဆရာမ လို့ ပြောတာထက် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်နဲ့ ခံစားမှုလေးတွေကို ပုံဖော် ဝေမျှပေးနိုင်တဲ့ စာရေးသူပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ စာပေတွေ လေ့လာရင်း စာလေးတွေရေးရင်း ဘယ်သူမှမသိလည်း ကိုယ်တိုင်အေးအေး ချမ်းချမ်းလေး နေနိုင်တဲ့ စာရေးသူ စစ်စစ် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
မေး = အစ်မရေးထားတဲ့ ဘလော့ပိုစ့်တွေကို အစ်မရဲ့ ဘလော့လေးမှာပဲ မျှဝေဖြစ်လား ...
အမ အက်မင်အဖြစ်ကူပေးနေတဲ့ ဆိုက်လေးရှိပါတယ်။ ဆိုက်နာမည်က မိုဘာ (www.moba4all.org) ပါ။ အမ ရေးသမျှ စာတွေကို အရင်ဆုံး မိုဘာမှာတင်ပါတယ်။ ဒုတိယ အမ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့မှာ တင်ပါတယ်။ တတိယ facebook မှာတင်ပါတယ်။ နောက်ကျန်တဲ့ Social Site တွေကိုလည်း သတိရရင် သွားတင်လေ့ရှိပါတယ်။
မေး = အစ်မက သုတ ရသ ခံစားချက် စာပေအကြောင်း အရာလေးတွေကို အဓိက ရေးသားတယ်ဆိုတော့ အချစ်ရေးကိစ္စ ၁၅၀၀ နဲ့ ပက်သက်ပြီး အစ်မ ဘယ်လိုနားလည်ခံယူထားတာလဲ ? အစ်မဘဝရဲ့ ချစ်သူ ဆိုတာရော ဘယ်လို ပုံစံမျိုးကို ရည်ရွှယ် ထားတာလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ခံစားချက်တွေနဲ့ စာရေးပေမယ့် အမမှာ ချစ်သူမရှိပါဘူး။ ၁၅၀၀ အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက် လူသားနှစ်ယောက်ကြားဖြစ်တည်နေတဲ့ ခံစားမှုလေးတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီခံစားချက်လေးဖြစ်တည်၊ ကြာရှည်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ချစ်ကြတယ်။ အချစ်ကို နားလည်မှုဆိုတာနဲ့လည်း ပံ့ပို့ပေးရတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ ခံစားချက်လေး တစ်ခု ရင်ထဲမှာ ရှိနေသရွေ့ ချစ်ကြတယ်။
နားလည်မှုပျက်ယွင်းသွားရင် အချစ်ဆိုတာလည်းကွယ်ပျောက်သွားကြတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ကြာလာရင် ၁၅၀၀ ကနေ သံယောဇဉ်အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။ ဒါကတော့ အချစ်တဲ့ပတ်သက်လို့ အမ ရဲ့ ယူဆချက် အမြင်ပေါ့နော်။ အမမှာ ချစ်သူရှိလာရင်တောင် အဲ့ဒီချစ်သူအတွက် စံသတ်မှတ်ချက် မထားပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုရင် ဘာကိုမဆို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်ရမယ်လေ။ စံတန်ဖိုးတွေနဲ့ တွက်ချက်ပြီး အချစ်ကို အသုံးမချလိုတာ အမခံယူချက်ပါ။
၅၂၈ ဆိုတာ ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားရင်တောင် မလုံလောက်တဲ့ မေတ္တာတရားပါ။ ၅၂၈ ဆိုတာမှာလည်း မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ရှိကြတာပါပဲ။ မိဘက သားသမီးဆီက ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ရှိတယ်။ သားသမီးကောင်းစားဖို့ဆိုတာ မိဘတိုင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ၅၂၈ မှာ ရလိုမှုတွေနည်းတယ် (ကင်းတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး)။ ပေးဆပ်မှုများတယ်။ အပူအပင် မကင်းပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းအေးမြခြင်းတွေပေးနိုင်တာ ၅၂၈ ပါ။ ဒီနေရာမှာ အမ အဖြေမတွေ့သေးတဲ့ အရာလေး တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အချစ်ကို ၁၅၀၀ ၊ ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတရား(လူသားတိုင်းအားလုံးမှာ ရှိသင့်သောတရား) ကို ၅၂၈ လို့ ဂဏန်းတွေပေးလဲ ဆိုတာပါပဲ။တွေ့ရှိလေ့လာ ချက်လေးတွေ သိရရင်တော့ အမ အရမ်း ကျေနပ်မိမှာပါ။
မေး = နောက်ထပ် အစ်မရဲ့ ဘာလော့လေးမှာ စာပေလေးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို ကြီုးစားသွားမယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူများ ကို သိအောင် ပြောပြပေးပါ။
သုတ၊ ရသ စာတွေ ဆက်လက်ရေးသွားမှာပါ။ ဘလော့ဂါတွေထဲက အတုယူရမယ့် စာရေးသားသူများကို အတု ယူပြီး ဒီ့ထက်ပို ကောင်းအောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ စာရေးသက် မကြာသေးတော့ အားနည်းချက်တွေရှိရင်လည်း သည်းခံပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ ချင်ပါတယ်။ဂျွန်မိုး ဆိုတဲ့ ကလောင်ကို ပိုကောင်းအောင် သွေးသွားပါ့မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး = အစ်မကို စာဖတ်သူများမှ အကြံညဏ်ပေးမယ် ခင်မင်ချင်လို့ လေးစားလို့ ဆက်သွယ်လာမယ် ဆိုရင် အစ်မကို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ လိပ်စာလေးက ?
ဟုတ်ကဲ့။ junemoe9@gmail.com မေးလ်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ စာရေးသားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ချင် တယ်ဆိုလည်း အမြဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
အခုလို မေးသမျှကို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးသော အစ်မ ဂျွန်မိုး အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ကာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူအများအတွက် စာပေအပိုင်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အကျိုးပြု အလင်းရောင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ဟုတ်ကဲ့။ ပြည့်လိုပါတယ်နော်။ အတတ်နိုင်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှ အများအကျိုးလည်း လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ အခုလို အချိန်ပေးပြီး မေးမြန်းပေးတဲ့ မောင်လေး နေဇော်လင်းကိုလည်း အမက ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဘလော့ကာ အစ်မနဲ့ ဒီလောက်ပဲ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ စာဖတ်သူများ အနေနဲ့ အစ်မ ရေးသားတဲ့ သုတ ရသ စာပေလေးတွေကို http://june-moe.blogspot.com/ မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင် ပါကြောင်း အသိပေး ပြောကြားရင်း အင်တာဗျုး အစီအစဉ် လေးကို ဒီနေရာလေးမှာ အသုံးသတ်လိုက် ပါရစေ ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေမယ့်